Fampiharana Visa ho an'ny mpitsidika any Nouvelle-Zélande, Mpizahatany any Nouvelle Zélande eTA Visa
Fampahalalana momba ny fizahantany any Nouvelle-Zélande ho an'ny mpitsidika rehetra mitady fitsangatsanganana fohy any Nouvelle Zélande
Manomboka amin'ny 1 Oktobra 2019, ireo mpitsidika avy amin'ny firenena Free Visa fantatra amin'ny anarana hoe Firenena Visa Waiver tsy maintsy mihatra amin'ny https://www.new-zealand-visa.co.nz ho an'ny fahazoan-dàlana elektronika amin'ny alàlan'ny Travel New Zealand Visitor Visa.
Rehefa manao a Fangatahana visa ho an'ny fizahantany any Nouvelle Zélande amin'ny Internet, afaka mandoa vola kely ianao amin'ny International Visitor Levy sy Electronic Travel Authority amin'ny fifanakalozana tokana. Tsy maintsy manana pasipaoro manan-kery avy amin'ny iray amin'ireo firenena Visa Waiver ianao vao hiditra an'i Nouvelle Zélande amin'ny NZ eTA (New Zealand Electronic Travel authorization)
Hevitra tokony homarihina ho anao Visa any New Zealand mpitsidika:
Azafady mba alao antoka fa manan-kery mandritra ny telo volana ny pasipaoro tamin'ny datin'ny nidirana tany Nouvelle Zélande.
Tsy maintsy manana a Adiresy mailaka mandeha handray ny alalana elektronika.
Tokony ho ianao fahaizana mandoa vola amin'ny Internet miaraka amin'ny fomba toy ny carte de crédit / debit na Paypal.
Ny tanjon'ny fitsidihanao dia tsy maintsy mifandraika amin'ny fizahan-tany.
Fitsidihana ara-pitsaboana ho any Nouvelle-Zélande mitaky Visa mitokana izay tsy saron'ny New Zealand Tourist Visa (NZ eTA), jereo ny Ireo karazana Visa New Zealand.
Tsy mila Visa mpitsidika any Nouvelle Zélande ianao raha mponina maharitra any Nouvelle-Zélande na tompona pasipaoro aostralianina (olom-pirenena). Ny mponina maharitra Aostraliana kosa dia tsy maintsy mangataka Visa any New Zealand Tourist Visa (NZ eTA).
Ny fijanonanao any New Zealand amin'ny fitsidihana tokana tsy tokony hihoatra ny 90 andro.
Tsy tokony hanana fanamelohana heloka bevava.
Tsy tokony ho lasa tantaran'ny sesitany avy amin'ny firenena hafa.
Raha manana antony marim-pototra hino ny governemanta New Zealand fa manana fandikan-dalàna ianao, dia ny Visa mpizahatany any Nouvelle-Zélande (NZ eTA) dia mety tsy ekena.
Antontan-taratasy ilaina amin'ny Visa any Nouvelle Zélande
Ianao dia mila ity manaraka ity ho vonona amin'ny fampiharana New Zealand anao amin'ny tanjon'ny fahitana maso sy fizahantany.
Pasipaoro avy amin'ny firenena afaka visa.
Validin'ny 90 andro ny pasipaoro amin'ny andro nidirana.
Pejy roa banga mba hahafahan'ny mpiasan'ny ladoany manitsakitsaka ny seranam-piaramanidina. Mariho fa izahay dia TSY mitaky ny hahita ny pasipaoronao na manana kopia scan na maka iraka ny pasipaoronao. Izahay ihany no mitaky ny laharan'ny pasipaoronao, ny daty lany daty.
Ny anaranao, anaranao, anaranao, daty nahaterahanao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny pasipaoro raha tsy izany dia azo lavina ny fiakarana amin'ny seranam-piaramanidina na seranan-tsambo.
Carte de crédit / Debit na kaonty Paypal.
Ahoana ny fomba ahazoana Visa any New Zealand Visitor
Azonao atao ny mampihatra an-tserasera amin'ny alàlan'ny dingana tsotra sy mivantana ary maharitra roa minitra amin'ny Internet Taratasy fangatahana New Zealand Esta hahazoana ny fahazoan-dàlana elektronika any Nouvelle-Zélande (NZ eTA).
Hamarino fa efa nohamarininao ilay fahazoana mandray anjara amin'ny eTA New Zealand anao.
Raha toa ka a Firenena Visa Waiver avy eo azonao atao ny mangataka eTA na inona na inona ny fomba fitetezam-paritany (Air / Cruise). Olom-pirenena Etazonia, Teratany Kanadiana, Teratany Alemanina, ary Olom-pirenena anglisy afaka mangataka amin'ny Internet ho an'ny New Zealand eTA. Ny mponin'i United Kingdom dia afaka mijanona ao amin'ny New Zealand eTA mandritra ny 6 volana raha ny hafa kosa mandritra ny 90 andro.